Fefy sy boaty fantsona centrifuge
Apetraho eo ambanin'ny lovia petri ny sombin-taratasy sivana boribory iray, apetraho eo amboniny ny tehina fitaratra miendrika U, ary apetaho eo amin'ny tsoratry ny fitaratra ny sary miisa roa madio. Aorian'ny fandefasana sterilization dia ampio mililitera vitsivitsy misy vahaolana 20-huzo menaka voadio amin'ny taratasy sivana amin'ny fomba aseptika. Ny asany lehibe ...Hamaky bebe kokoa »
Momba ny fampiasana ny fandefasana kasety fandefasana kasety sy ny raharaha mila fitandremana
Fomba 1. Atsofohy ao anaty cassette fampidirana azo ampiasaina miaraka amina tarehin-tsoratra voasoratra ao ny takelaka misy ny takelaka, rakofana ny boaty misy ny dewatering (vy tsy misy fangarony), ary apetraho ao anaty sobika misy fantsom-bary ao anaty masinina mandrehitra na mandehandeha amin'ny tanana. 2.Ataovy maty ao ambany ao anaty sosona ...Hamaky bebe kokoa »
Ny refy, ny fitomboana, ny famakafakana ary ny vinavina 2030 momba ny indostrian'ny famokarana ambony indrindra amin'ny swab fitaterana eo anelanelan'ny tsena
Fotoana fandefasana: Jun-02-2021
Ny fitomboan'ny tranga COVID-19 manerantany sy ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa fitiliana any amin'ny laboratoara no tena mamporisika ny fampiasana swab vaovao sy ny fampitam-baovao momba ny virus. Ankoatr'izay, ny masoivohon'ny governemanta dia manery ny fankatoavana haingana ny vokatra eo amin'ny tsena ao ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Mey-26-2021
Karazana autoclave lovia Petri maro be amidy
Miaraka amin'ny orinasa maromaro, afaka nanolotra karazana autoclave petri lovia maro samihafa izahay, lozisialy petrique laboratoara !, Miarahaba ny mpanjifa eraky ny teny izahay mba hifandray aminay amin'ireo fifandraisana eo amin'ny orinasa ho avy. Ny entanay no tsara indrindra. Raha vao voafantina, mety mandrakizay! Tena mahomby tokoa izahay ...Hamaky bebe kokoa »
Takelaka misy ny zava-misy: nanambara hetsika vaovao ny filoha Biden hanitatra sy hanatsara ny fitsapana ny COVID-19
Ao anatin'ny paikadim-pireneny nasionaly ho an'ny valiny COVID-19 sy ny fiomanana amin'ny areti-mandoza dia nanambara androany ny andiana hetsika vaovao hanitarana ny fitsapana COVID-19, hanatsara ny fisian'ny andrana ary hiomanana tsara amin'ny fandrahonana hafa. Satria miasa manodidina ny c ...Hamaky bebe kokoa »
Ny anjara toerana lehibe amin'ny lovia Petri
Ny lovia Petri (lovia Petri) dia lovia vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny silindrano marivo izay matetika ampiasaina amin'ny kolontsaina zavamiaina bitika (takelaka agar). Misy lovia Petri fitaratra sy plastika, ary samy azo atao sterilized (mampiasa autoclave) ary ampiasaina indray. Alohan'ny hampiasana azy ho an'ny tanjona kolontsaina dia zava-dehibe ny ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Mey-14-2021